23 Askari oo ku dhintay Weerarkii Xooganaa ee deegaanka Ceel Saliini.
Sunday September 22, 2019 - 13:13:54 in Wararka by Liibaan Jeexoow
War kasoo baxay taliska ciidanka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in weerar loo adeegsaday camaliyad Istish-haadi ah iyo duullaan toos ah lagu qaaday saldhigga maleeshiyaatka Soomaalida ee deegaanka Ceel-Saliini ayna halkaas ku xas
War kasoo baxay taliska ciidanka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in weerar loo adeegsaday camaliyad Istish-haadi ah iyo duullaan toos ah lagu qaaday saldhigga maleeshiyaatka Soomaalida ee deegaanka Ceel-Saliini ayna halkaas ku xasuuqeen askar fara badan.
Sheekh Cabdi Casiis Abuu Muscab Afhayeenka ciidanka ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalyahanadoodu aroornimadii hore ee saaka ay cagta mariyeen maleeshiyaatkii ku sugnaa saldhigga Ceel-Saliini ayna soo ganiimeysteen hub, gaadiid iyo agab military.
Abuu Muscab ayaa sheegay in ugu yaraan 23 askari oo ka mid ahaa maleeshiyaatka Soomaalida lagu dilay weerarkaas, sidoo kalena nolosha lagu qabtay askar dhowr ah.
Wuxuu sidoo kale sheegay in ay 'Mujaahidiintu' xeradaas kasoo ganiimeysteen ugu yaraan 6 gaari oo kuwa ciidanka ah kuwaas oo saddex ka mid ah la sheegay inay saarnaayeen qoryo culus.
Al-Shabaab ayaa sidoo kale sheegtay inay soo ganiimeysatay keydadkii hubka ee yaallay xerada Ceel Saliini ayna gacanta k soo dhigtay hub culculus iyo kuwo fudud rasaas noocyadeeda kala duwan iyo agab military.
Weerarkan ayaa noqonaya midkii ugu xumaa ee ay la kulmaan maleeshiyaatka DFS tan iyo markii ay bilaabeen olole dagaaleedka ka dhanka ah Xarakada Al-Shabaab ee ay ka wadaan Sh/hoose, waxaana su'aalo la gelinayaa awoodda difaaca ee maleeshiyaatkan lagusoo daabulay jiidda hore ee lagu soo owday xeryaha military.
Saldhigga saakey la weeraray ee Ceel Saliini ayaa qiyaastii 20km dhanka Waqooyi kaga beegan magaalada Marka ee xarunta Shabeellaha hoose, waana deegaan istaraatiiji ah oo muhiimad gaar ah u lahaa dhaq dhaqaaqyada ciidan ee maleeshiyaatka DF isagoo ka dhignaa taliska dhexe ee laga hago howlgalada military ee ka socda gobolka.
Ciidamo katirsan DF oo Askari ku dilay degmada Shibis.
Maamulka 'Somaliland' Oo Maxaabiis ku gummaaday deegaanka Mandheera.
Askari oo canug yar ku dhax dilay xarunta gobolka Banaadir.